Ma doonaysaa in ay koraan #herbs wanaagsan sanadkan? Our Amy ayaa qaar ka mid ah fikradaha weyn u
Koraaya geedo yaryar waa hiwaayad caan ah oo cuntada kariya, iyo beeralayda si isku mid ah. Waxaan ula jeedaa aan fikradda ah ku dul baxay oo aad Backyard iyo miro geed yar oo kasta oo aad u baahan tahay, waayo, cuntada aad cunto cusub ka saaray Beer ma jeceshahay? Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan dhigtee waa in ay yihiin dhirta dayactir aad u yar yahay, taas oo ka dhigaysa ...
Dhowr Geedaha Best House
Inkastoo ay jiraan dad badan oo dhirta cagaaran ciyaari kara hawada nadiif ah, si wax ku ool ka saar doorka wasakhda gudaha, laakiin dhawaan la dayac tiray guryaha sakhiray in wasakhda kiimikada, Hadeydaan, Chlorophytum, Sansevieria iyo dhirta kale ee waa shiir ugu fiican ee dabiiciga ah. saynisyahano NASA 20 sano ah ka dib markii r ...
posts More saabsan dhalatada oo sii kordhaya
kaydka qiimaha dhigtee sii kordhaya ee ugdoon qallajinta beerta: Tallaabo-tallaabo tilmaamaha Plant dill dheeraad ah dhicin swallowtail Our kala duwan basil ugu cadcad
Bacriminta for weelasha beerta geedo yaryar
Dhir koray in weelasha u baahan doontaa bacrimin ka badan kuwa ku koray beerta. Taasi waa sababta oo ah waxay leedahay ee ma suuroowdaa jid buuxsama nafaqooyinka ilaa ay u isticmaalaan sidii ay u koraan. Laakiin ha ka welwelin, uma baahnid inaad si ay u iibsadaan wax kasta oo bacrimin sheeegateen oo si gaar ah loogu talagalay weelasha aad, waxaad isticmaali kartaa bacriminta isku ...
Marka ay timaado in kordhaya cunto caafimaad leh adiga kuu gaar ah, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dabiiciga ah, Bacriminta organic. Waan ogahay beer organic dhawaajin karaa cabsi, iyo dadka u muuqdaan in ay gaaraan si ay u walax kiimiko ah, maxaa yeelay waxa ay u muuqataa fudud. Laakiin nooca shaqada, iyo isticmaalka Bacriminta organic beerta ma aha caafimaad keliya ...
iibka ubax tayo sare leh
Maanta, Shandong jinan erhuanxi waddada isugu in fu suuqa ubax Lai. Dad badan oo xataa visitors, awelna loola ubaxyadii dooran iyo iibsan. Ms xue iyo qoyskiisa in ay ubaxyadii dooran iyo iibsan. Ka dib markii a "gorgortan", Ms xue weysada gadashada warshad lacagta, laba orchid balanbaalis berkeddii weysada, lix 10 Asal. Sh ...
Sidee ku qaataan oo dheryay ku ubaxa? Tallaabooyinka oo dheryay ku ubaxa
Dadka waxay jecel yihiin ubaxa in taranta ubaxa waqti cayiman, waa in ubax weysada hawlgalka, sida caadiga ah ku jira xeedhada waa in lagu fuliyaa warshad nasinta, oo aroor hore markii guga dhamaadka February si Maarso hore, sidoo kale goor dambe sida bilowgii ee April, dheef geedka ugu yahay mid gaabis ah, at t ...
Good iyo maddiibad seedling dheriga dhirta wakhtiga guurtay?
Qingdao Bo kaliya transplanting et fitow warshadaha & ganacsiga co., LTD., Transplanting hore, UNDSS kooban waa caadi. Inta badan sababta oo ah transplanting nidaamka xididka waa ka badan ama ka yar ayay saamayn doontaa barta, ka dib markii transplanting, ha qabow, meel hawo geedo gaabis ah in dhowr maalmood Ca ...
Dhowr Geedaha Xannaanada Best
Inkastoo ay jiraan dad badan oo dhirta cagaaran hawada u Daahirina karaan, wax ku ool ah ka saar saamaynta wasakhda gudaha, laakiin in guryaha qurxinta cusub by wasakhda kiimikada, Vera Hadeydaan, bracketplant, dhirta sansevieria waa mid ka mid ah waxyaabaha dabiiciga ah ugu waxtarka badan. saynisyahano NASA ka dib markii in ka badan 20 sano ...
Micnaha ay dhammaan noocyada kala duwan ee ubax
Tulip qirashada jacayl, sharaf, barako, Tulip weligeed ah (Purple) jacaylka aan dhammaanayn, waxay jecel yihiin Tulip (cad) oo aan waxba galabsan, Tulip saafi ah (pink) quruxda, jacayl, Tulip farxad (Red) qirashada Love, Tulip farxad (huruud) oo sharaf leh, oo maal, iyo hodan Lily siman, oo dhan rabitaanka rumowday, duco Cadar ubaxa oo saafi ah, hodan ah, aroos ...